Qiimaha Jumlada Shiinaha ee HXGN-12 AC High Voltage Switchgear Go'an Birta Xidhan ee Wareega Wareegga-shengte saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Shengte
Qiimaha Jumlada ee HXGN-12 AC Bedelida Voltage Sare ee Birta go'an
H XG N-12 AC koronto-sare oo go'an oo go'an oo xiran wareegga wareegga wareegga waa saddex-waji AC oo lagu qiimeeyay danab 12KV, soo noqnoqda 50H Z gudaha gudaha korantada korantada sare iyo sahay koronto ah.
Qalabka beddelka.Lagu dabaqi karo shirkadaha warshadaha iyo macdanta, guryaha la dego, dhismayaasha dhaadheer, jardiinooyinka dugsiga iyo meelaha kale ee nidaamka qaybinta ee helitaanka iyo qaybinta tamarta.
Qalfoofka golaha wasiirada waxa lagu alxanayaa godad modules 20mm ah, dabeeduhuna waa armaajo go'an oo nooca sanduuq ah oo dhinac ku dheggan.
Qaybta sare ee golaha wasiiradu waa bas, qolka qalabku waxa uu ku yaalaa afaafka hore ee qolka baska, waxaa lagu kala saaraa saxan bir ah, qaybta dhexe ee golaha wasiiradu waa qol beddelka rarka, waxaana kala soocaya looxa dahaarka iyo qolka baska. .
Saxanka daboolka sare ee golaha wasiirada waxaa lagu dhejiyay daaqado hawo, iyo saxanka albaabka dambe iyo saxanka dhinaca waxaa la siiyaa godadka hawo-qaadista ee louver.
Golaha wasiirada iyo albaabbada albaabada waxaa lagu buufiyaa rinjiga budada polyester epoxy, oo lagu daaweeyay heerkul sare, oo leh qurux badan iyo iska caabin daxaleed oo xooggan.
Laydhka rakibidda ee golaha wasiirada, qaybta dhexe iyo saxanka hoose waxaa lagu daaweeyaa galvanizing.
Xagga hoose ee golaha wasiirada, giraanta caagga ah ee nooca munaaradda ah ayaa lagu rakibay guddiga dahaarka ee hoose, kaas oo ku habboon fiilooyinka cabbirka kala duwan.
Dabool wareejin, dabada dhulka iyo albaabka golaha wasiirada ayaa leh is dhexgal farsamo oo la isku halayn karo, kaas oo xaqiiqsaday shaqada "shan ka hortag".
Albaabka golaha ayaa xidha oo rogaya qufulka albaabka.Waqtigaan, furaha weyni wuu xirmayaa waana xiran yahay.Mindidii dhulka la dhigay ayaa la furay, mindida dhulkana waa la furi karaa.
Furaha ugu weyn waxaa la furi karaa oo keliya ka dib marka mindida dhulka la furo oo xannibaadda furaha weyn la sii daayo.
Ka dib marka furaha weyni xiro, mindida dhulka hooseysa waa xirmeysaa oo xireysaa, albaabka golaha waa xiran yahay, albaabka furaha lama dhaqaajin karo.
Ilaa iyo inta uu damilo dabka weyn, gooyaha dhulka ayaa furmi kara oo qaska badbaadaduna waa xidhan yahay.
Kaliya marka mindida dhulka la xidho ayaa qufulka albaabka la rogi karaa oo albaabka golaha la furi karaa.
Mindida dhulka la dhigayo waa in la xidho marka fiyuuska loo baahan yahay in la beddelo ka dib marka pin fiyuuska la shaqeeyo.
Marka aysan jirin mindi dhulka lagu dhejiyo, furitaanka iyo xidhitaanka hawlgalka baffle badbaadada ayaa weli la fuliyaa iyadoo la raacayo habka hawlgalka ee mindida dhulka, iyo isku xigxiga isku xigxiga ayaa sidoo kale lagu dabaqi karaa.
Qaab dhismeedka gudaha ee si taxadar leh loo qaabeeyey ee qufulka beddelka ayaa ka dhigaya isku xidhka mid la isku halayn karo.
Kabbaneetka cable-ka, marka loo eego baahida isticmaalaha, marka khadka la koronto, qufulka electromagnetic waxaa loo isticmaali karaa in lagu xakameeyo albaabka golaha, ama qufulka waxaa loo isticmaali karaa in lagu xakameeyo furitaanka albaabka golaha.
Marka boodhka laga saaro oo loo furo albaabka golaha wasiirada, waxa ku yaal xannibaad plexiglass ah iyo calaamad mamnuuc ah.
Dhamaadka hoose ee golaha wasiiradu waxay ku xiran yihiin saf gaar ah oo dhulka ah si loo hubiyo ilaalinta la isku halleyn karo oo badbaado leh.
Dabooleyaasha waxaa lagu xidhaa dahaariyeyaasha bandhiga tooska ah iyo xirayaasha baararka naxaasta ah.
Dhammaan albaabada golaha wasiirada waxay ku qalabaysan yihiin bandhig toos ah.Albaabada albaabbada la furay waxa la shaqayn karaa oo keliya haddii aan la xaqiijin bandhig koronto.
Laydh-dhal ah ayaa lagu rakibay qaybta gudaha ee albaabka golaha si ay u iftiimiso iyo shaqada aan qoyaanka u ilaalin ee golaha wasiirada.
Inta jeer ee la qiimeeyay 50Hz
Hadda la qiimeeyay 630A Iyadoo ku xiran xudunta
Fiyuuska hadda la qiimeeyay ugu badnaan - 100A
Lagu qiimeeyay dulqaadka wakhtiga gaaban (xasiloonida kulaylka) hadda (RMS) Raad beddelka 20A/4s -
Iska caabbinta wareegga ugu weyn ≤120μΩ
Lagu qiimeeyay culayska firfircoon ee jabinaya hadda 630A
Lagu qiimeeyay daminta daminta-xidhka 630A
Cable La Qiimeeyay Hadda 10A
Lagu qiimeeyay xiritaanka wareegga gaaban ee hadda 50kA -
Xawilaadda hadda la qiimeeyay - 1000A
La qiimeeyay hadda jebinta wareegga gaaban - 31.5kA
Korantada Dulqaadka Muddada Gaaban ee Joogtada Korontada (1 daqiiqo) Marka la eego iyo waqtiga 42kV
Jab go'doon ah 48kV
Hilaaca shoogga u adkeyso danab Marka la eego iyo waqtiga 75kV
Jab go'doon ah 85kV
Nolosha makaanikada 2000 oo qaybood
Heerka ilaalinta IP3X
Cabirka dibadda (qalabka gudaha iyo dibaddaba) ballac x qoto dheer x sare 400x900x2000 (1700)
Hore: Tayada Sare XGN15-12 Nooca Sanduuqa ah ee AC Birta go'an ee Sulfur Hexafluoride Loop Warshada Wershadda Gelinaysa
Xiga: GCK(L) La Habeeyay ee Qalabka Korantada Hooseeya ee Warshada Warshada Qiimaha-shengte